नयाँ पासवर्ड राख्दै हुनुहुन्छ ? सन् २०२० मा धेरै प्रयोग गरिएका यी पासवर्डहरु Canada Nepal
'नाचिदेउ बसन्ती'मा उत्कृष्ट भिडियो बनाउनेलाई १ लाख पुरस्कार दिइने
नयाँ पासवर्ड राख्दै हुनुहुन्छ ? सन् २०२० मा धेरै प्रयोग गरिएका यी पासवर्डहरु
काठमाडौं - मानिसहरूले सम्झिरहन सजिलो इन्टरनेट पासवर्डको प्रयोग गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा ह्याकरहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ ।
हामिले प्रयोग गरिरहेका कमजोर पासवर्डहरु धेरै नै असुरक्षित रहेको पनि पाइएको छ । हाम्रो सजिलोको लागि सबैले सजिलै अनुमान लगाउन सक्ने पासवर्डहरु राख्ने गर्छौ । जसले गर्दा धेरै प्रयोगकर्ताहरुको डेटा जोखिममा पर्ने गर्छ ।
यस्तै सन् २०२० का सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेका पासवर्डहरु असुरक्षित रहेको पाइएको छ । नर्डपासले गरेको एक सर्वेक्षणमा सजिलै सम्झन सकिने र धेरैले प्रयोग गरेको पासवर्डमा शीर्ष तीनमा १२३४५६, १२३४५६७८९ र पिक्चर१ रहेका छन् ।
त्यस्तै चौथो स्थानको सजिलो पासवर्ड ‘पासवर्ड’ रहेको छ । नर्डपासले मूल्याकंन गरेको २७५,६९९,५१६ डेटाबेस मध्य १२२,८९४,७८८ ओटा पासवर्डहरु नयाँ रहेको छ भने अरु पासवर्डहरु धेरै पटक दोहोरिएका छन् ।
हामिहरुले आईलभयू, ओएमजीपप, आस्ले, च्याटबुक्स, प्रिन्सेस, सनसाइन, ड्रागन र पोकेमन जस्ता पासवर्डहरु प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
सन् २०२० मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएका २०० मध्ये ७८ ओटा पासवर्डहरु मात्रै नयाँ रहेका थिए । हामिले सकेसम्म पासवर्ड परिवर्तन गरिरहनु राम्रो हुन्छ । पासवर्ड राख्दा अरुलाई ह्याक गर्न नमिल्ने कठिन प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सन् २०२० मा धेरै प्रयोग गरिएका यी पासवर्डहरु - 123456, 123456789, picture1, password, 12345678, 111111, 123123, 12345, 1234567890, senha, 1234567, qwerty, abc123, million2, 000000, 1234, iloveyou, aaron431, password1, qqww1122
मंसिर १०, २०७७ बुधवार १३:३०:२६ बजे : प्रकाशित
नेपालकी यी महिला, जसले लामो समयदेखि दैनिक रुपमा ३० खिल्ली चुरोट पिउँदै आएकी छिन्
काठमाडौं - विश्वमा धेरै मानिसहरुले अनौठा कार्यहरु गरेर विश्वलाई नै चकित पारिरहेका छन् । अनौठो कार्य गरेर धेरै मानिसले विश्व रेकर्ड पनि राखेका छन् । तर नेपालमै एक यस्ती महिला छिन् जसको कार्यले धेरै मानिसहरु चकित परेका छन् ।
तपाईलाई थाहा छ, एक अंग्रेजी वेबसाइट अनुसार ११५ वर्षकी बाटुली लामिछानेले लामो समयदेखि दैनिक रुपमा ३० खिल्ली चुरोट पिउँदै आइरहेकी छिन् । उनले १७ वर्षको उमेरदेखि चुरोट पिउँदै आइरहेकी छिन् ।
परिवारको कुरा गर्दा उनले ५ जनाको सन्तानलाई जन्म दिएकी छिन् । तर अहिले उनका एक छोरा मात्र जिवित छन् ।
उनले जिन्दगीमा धेरै उतार चढाव आएको बताउछिन् । उनले आफ्नो काम आफै गर्ने गर्छिन् । अहिले उनले मन्दिरलाई नै आफ्नो घर बनाएकी छिन् ।
माघ ६, २०७७ मंगलवार २१:५९:०५ बजे : प्रकाशित
# बाटुली लामिछाने
अनौठा परम्परा भएको स्थान, जहाँ ४० किलोको फुटबल म्याच खेलिन्छ
काठमाडौं - विश्वमा धेरै अनौठा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । अनौठा घटनाहरुको बारेमा हामिलाई थाहा पनि हुँदैन । तर एक्कासी सुन्दा वा देख्दा अनौठो लाग्ने गर्छ । यस्तै भारतमा एक अनौठो परम्परा छ ।
भारतको राजस्थानस्थित बुन्दी जिल्लामा एक अनौठो परम्परा छ । सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर यहाँ माघे संक्रान्तिको दिन ४० किलोको फुटबल खेल्ने गरिन्छ ।
यो परम्परा ७०० वर्षदेखि चल्दै आइरहेको छ । ४० किलोको फुटबल म्याच राजपूत समाज र गाउँका मानिसबीच हुने गर्छ ।
यो म्याच हेर्न धेरै टाढाबाट पन मानिसहरु आउने गर्छन् । यस म्याचमा युवा मात्र नभई वृद्ध पनि भाग लिन पाउछन् ।
माघ ५, २०७७ सोमवार २१:२८:५७ बजे : प्रकाशित
# ४० किलोको फुटबल म्याच
अनौठो परम्परा, जहाँ बच्चा जन्माएपछि मात्रै धुमधामले विवाह गरिन्छ
काठमाडौं - विश्वमा धेरै जाति, समुदाय र वर्गका मानिसहरु छन् । उनीहरुको आफ्नै रीति रिवाज र परम्परा हुन्छन् । यस्तै विश्वमा यस्तो परम्परा पनि छ, जुन निकै आश्चर्यजनक छन् ।
भारतमा यस्तो अनौठो परम्परा भएको समुदाय पनि छ, जहाँ बच्चा जन्माएपछि मात्रै विवाह गर्ने गरिन्छ । भारतको राजस्थानमा गरासिया ट्राइबका मानिसहरु विवाह अघि नै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा रहदै आउने गर्छन् ।
यहाँका मानिसहरु पछिल्लो एक हजार बर्षदेखि यसरि नै बस्दै आइरहेका छन् । उनीहरुको परम्परामा विवाह अघि बच्चा जन्माउने गरिन्छ ।
यो चलन एक हजार वर्ष पहिलादेखि चल्दै आएको जनाइएको छ । गरासिया जातका मानिस राजस्थान र गुजरातमा केही स्थानमा बस्ने गर्छन् । उनीहरुको कयौ कैयौ पिढीदेखि केही परिवारमा कसैको पनि विवाह भएको छैन ।
यो परिवारमा पहिले विहे गरेमा सन्तान नहुने बताइन्छ । त्यसैले बच्चा जन्माएपछि मात्र विवाह गरिन्छ । राजस्थान र गुजरातमा लाग्ने विवाह मेलामा युवा युवतीहरु एक अर्कासँग भेट गर्ने वा भाग्ने गर्छन् ।
माघ ४, २०७७ आइतवार २१:३०:२० बजे : प्रकाशित
# अनौठो परम्परा
वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए अनौठो प्रजातिको माछा, जसले पिसाबको माध्यमबाट एकआपसमा कुरा गर्छ
काठमाडौं । विश्वमा हामिलाई थाहा नभएका धेरै प्रजातीका माछाहरु छन् । हामिलाई केही प्रजातीका बारेमा मात्र थाहा हुन सक्छ । माछाहरु अनौठो र खतरनाक पनि हुन्छन् ।
आज तपाईलाई यस्तो माछाको बारेमा जानकारी दिदैछु, जसले अनौठो तरिकाले एक अर्कासम्म आफ्नो कुरा पूराउँने गर्छ । हामिहरुले विभिन्न जीव जनावरले आवाज वा कुनै संकेतको माध्यमबाट एक अर्कासम्म आफ्नो कुरा पूराएको देखेका छा्रै ।
तर विश्वमा यस्तो प्रजातीको माछा छ, जसले आफ्नो पिसाबको माध्यमबाट एक आपसमा कुरा गर्ने गर्छ । पिसाबको माध्यमबाट एक आपसमा कुरा गर्ने माछाको बारेमा वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका हुन् ।
सिच्लिड माछाको एक प्रजाति अनौठो हुन्छ, यसले आफ्नो पिसाबको माध्यमबाट एक आपसमा कुरा गर्ने गर्छ । यस माछाले पिसाबमा रहेको रसायनको माध्यमद्धारा आफ्नो साथिलाई संकेत गर्ने गर्छ । कुनै खतरा थाहा भएमा पिसाबबाट नै सावधान गराउछ ।
माघ १, २०७७ बिहिवार २१:१२:४० बजे : प्रकाशित
यस्तो देश, जहाँ मोटोपन भएकालाई भेदभाव गरिन्छ
काठमाडौं । हाम्रो देशमा मोटोपन भएका मानिसहरु धेरै छन् । मोटोपन भएका मानिसहरुलाई खाए लागेको जस्तो देखिएको भन्ने गरिन्छ । मोटो शरिर भएकालाई नराम्रो मान्ने पनि गरिदैन । तर यस्तो देश पनि छ, जहाँ मोटो मानिसलाई राम्रो मानिदैन ।
मोटोपन भएका मानिसलाई भेदभाव गर्ने गरिन्छ । तपाईलाई थाहाँ नहोला, इंग्ल्यान्डमा मोटोपन भएकालाई राम्रो मानिदैन । यहाँ अफिसमा पनि पाताला कर्मचारी नै खोज्ने गरिन्छ ।
मोटोपनसँग जोडिएका खबरले मोटा मानिसहरुलाई तनाव हुने हुनाले यस्तो भेदभाव सकिने बताइएको छ । बिशेषज्ञहरुले यस विषयमा कानुन बनाएर भेदभाव हटाउन माग पनि गरिरहेका छन् ।
कानुनले मोटा मानिसहरुलाई गरिने क्रुर टिप्पणीमाथि मुद्दा दायर गर्न दिएमा यस्तो भेदभाव अन्त्य हुने बताइएको छ ।
यस्ता मानिसहरुले काम नपाउने र पाएपनि दुखले पाउने समस्या रहेको छ । यस्ता मानिसहरुले काम पएमा पनि बर्खास्त भइहाल्ने गर्छन् । यहाँ १४-१५ प्रतिशत वयस्क मानिसहरु मोटोपन भएका छन् ।
पौष २९, २०७७ बुधवार २२:०४:०९ बजे : प्रकाशित
# मोटोपन भएकालाई भेदभाव
काठमाडौँ - बिश्वमा धेरै प्रतिभा भएका मानिसहरु छन् । धेरैले अनौठो कार्य गरेरै गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड पनि राखेका छन् ।
त्यस्तै एक पुरुषले पनि आफ्नो अनौठो प्रतिभाले बिश्वलाई नै चकित पारेका छन्। उनको लामो नङ देखेर जोकोही हेरेको हेर्यै हुन्छ । भारतमा यस्ता पुरुष छन्, जसले हातमा २ मिटर लामो नङ पालेका छन् ।
भारतका श्रीधर चिलानले १९५२ देखि हातका नङ पाल्न शुरु गरेका हुन् । उनले अहिलेसम्म नङ काटेका छैनन् । हातमा सबैभन्दा लामो नङ भएकै कारण उनले विश्व रेकर्ड पनि राखिसकेका छन् ।
लामो नङका कारण चर्चामा आएका उनले नङलाई एक संग्रहालयमा दिने सोच पनि बनाएका छन् । उनले आफ्नो नङकै कारण आफुलाई विवाहको लागि पनि समस्या भएको बताए ।
लामो नङ भएकै कारण केही युवती विवाह गर्न पनि मानेनन् । विद्यालय जाने बेलाको कुरा सम्झदै उनले नङ नकाटेकै कारण शिक्षकको कुटाई खाएको पनि बताए । लामो नङकै कारण उनलाई जागीर खान पनि समस्या परेको थियो ।
पौष २८, २०७७ मंगलवार २१:४८:२९ बजे : प्रकाशित
# लामो नङ